Guddoomiye Cumar Filish oo daah-furay ololaha qaadista Canshuuraha - Jowhar Somali news Leader
Home News Guddoomiye Cumar Filish oo daah-furay ololaha qaadista Canshuuraha
Guddoomiye Cumar Filish oo daah-furay ololaha qaadista Canshuuraha
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa daahfuray Nidaamka qaadista Canshuuraha kala duwan ee Gobolka Banaadir oo laga dhigay qaab casiri ah oo ka duwan qaababkii hore loo qaadi jiray.
Agaasimaha waaxda Canshuuraha Dowlada hoose Xamar, Ayaan Cabdi Maxamud ayaa faah faahisay ololahaani.
“Gaadiidkan waxey ka howlgali doonaan afarta qeyb oo ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho si ay wacyigaliyaan bulshada islamarkaana loo dardargaliyo qaadista Canshuuraha kala duwan ee daqliga”.
Guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Gobolka Banaadir, Ibraahim Cumar Mahad-Alle (Ibraahim dheere) ayaa tilmaamay in ay la dagaallami doonaan Musuq-Maasuqa.
“Bixinta Canshuuraha waxay ka turjumeysaa sax ahaanshaha muwaadinnimada waana waajib saaran qofkasta oo muwaadin ah, ka maamul ahaan waxaa naga go’an la dagaallanka Musuq-Maasuqa”ayuu yiri Ibraahim dheere.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, mudane; Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa ugu baaqay Bulshada Soomaaliyeed in ay fududeeyaan bixinta Canshuuraha si loogu guuleysto hirgelinta mashaariicda ee adeegyada Bulshada.
“Waxaan si xushmad ku jirto ug codsaneynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed in ay si dagan ku bixiyaan canshuurta ku waajibtay si aan dib iyaga ugu celino islamarkaana loogu fuliyo adeegyada aas aasiga ah ee bulshada, waan la xisaabtami doona cidkaste oo aan iska bixinin canshuurta ku waajibtay.
Dowlada hoose Xamar ayaa xarunta Gobolka Banaadir kusoo bandhigtay Gaadiid kala duwan oo qeyb ka noqon doono ololaha wacyigalinta bixinta Canshuuraha iyo sidoo kale dabagalka la xisaabtanka muwaaddiniinta iska dhagatira iney bixiyaan qidmadda ku waajibtay.
Olole lagu ururinayo canshuraha oo ka bilowday Muqdisho
Mahad Cawad oo farriin u diray Saciid Deni “Doorasho loo socdaa hala idinka amaan helo”